१८ असोज, सप्तरी । मलेसियामा रहेका सप्तरीको हर्दिया गाविस ७ का २३ वर्षीय ओमप्रकाश महतो घर फर्किने तयारी गरिरहेका थिए । सम्पूर्ण कागजात तयार पारेका उनले जहाजको टिकट लिन मात्रै बाँकी थियो । कम्पनीबाट छुट्टी लिएर उनी नेपालीले नै सञ्चालन गरेको एसटी होलिडे लजमा एक रात बसे । त्यहाँबाट भोलिपल्ट…
दुर्घटनाले लुट्यो दशैँ खुशि
पोखरा, १७ असोज । रेम बि. क एकाविहानै घर पुगेर खाना खाऊँला र ईष्टमित्र साथीभाईसँग भेटघाट गरौँला भनेर काठमाण्डौदेखि करिब ६ बजे बसमा परिवारसहित चढेका थिए गुल्मी नेटाका नारायण अर्याल । काठमाण्डौबाट २ बजे हिँड्ने बसको टिकट काटेपनि बसले ढिलो गर्दा ६ बजे बल्ल बुर्तिबाङको गाडी हिँडेको थियो । तर…
रेम बि.क कुरा २० वर्ष अगाडिको हो । म्याग्दीको बेनी शहर त्यति बिकसित भैसकेको थिएन । भर्खर २० वर्ष पुगेको एउटा युवाले ईष्टमित्रहरुसँग करिब १ लाख रुपैयाँ सापटी मागेर एउटा ‘टेलर पसल’ खोल्यो, आफ्नै नाममा । उसको नाम थियो बबिन बागदास । पसलको नाम चाँहि ‘बबिन टेलरिङ’ । एकदुई वटा…
१६ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारदेखि आफ्ना कार्यालयहरुबाट सर्वसाधारणलाई दसैंका लागि नयाँ नोट सटही सुविधा दिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले थापाथलीस्थित बैंकिङ कार्यालय र मोफसलका क्षेत्रीय कार्यालयबाट नयाँ नोट वितरण गरिरहेको प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले एक जनालाई ५, १०, २०, ५० र १००…
प्रेम बानियाँहरु किन भासिन्छन् अमेरिकातिर ?
देशको ठेक्का लिएकाहरुले छोराछोरी स्वदेश फर्काउन् कृष्ण सरगम भट्टराई यो हप्ता सामाजिक मिडियामा एउटा समाचारले राम्रै चर्चा पायो: न्यूज़-२४ मा ‘जय स्वाभिमान’ कार्यक्रम चलाउने चर्चित पत्रकार प्रेम बानियाँ सपरिवार अमेरिका छिरे रे ! कसैले बानियाँलाई झूठो स्वाभिमान भिरेका भगौड़ा भने, कोही हामी विरुद्ध प्रहार गर्ने पात्र पलायन भो भनेर खुशी…
१५ असोज । विजयादशमीको पहिलो दिन शनिबार घरघरमा कलश स्थापना गरी घटस्थापना मनाइँदै छ । आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिनलाई घटस्थापना गरिन्छ । आजैदेखि नवरात्र आरम्भ हुन्छ । घटस्थापनाका दिन दियो, गणेश र कलशको पूजा गरी घटस्थापना गर्ने र शक्तिस्वरुपा महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पूजा गर्दै जमरा राखिने गरिन्छ । आज…
फेसबुक ग्रुपबाट युवाले जुटाए आर्थिक सहयोग।
जक्सन डटकम पोखरा असोज-९ , आजको युग विज्ञान, प्रविधी र सुचना सन्चारको युग ।तपाइ आफै पनि महसुस गर्नु भएको होला यो युगमा भिड्न र जिउन शिक्षाको आवश्यक कती पर्छ भन्ने कुरा । तर हाम्रो समाजमा अझै पनि यस्ता घटनाहरु छर्प्रष्टै छन कि कतिपय बालबालिकाहरु विभिध कारणले शिक्षाको ज्योती बाट टाढै…
डोटी– दिपायलस्थित सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वार्टर दिपायलबाट हराएको हतियार शुक्रबार फेला परेको छ। हराएको ५० औँ दिनपछि सो हतियार फेला परेको हो। नियमित सर्चका क्रममा शुक्रबार बिहान पृतनाको हाताभित्रै हतियार फेला परेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वार्टरले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै पृतनाबाट कुलपाते जाने बाटोमा सो हतियार फेला…
५ असोज, काठमाडौं । आगामी शुक्रबारदेखि दशैंको लागि सार्वजनिक सवारी साधानको अगि्रम टिकट बुकिङ खुला हुँदैछ । दशैंमा राजधानीबाट आफ्नो घर फर्किनेहरुले बसको टिकट काट्न ब्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । त्यसैले टिकट खुल्नासाथ काठमाडौंका कोटेश्वर, गौशाला, नयाँ बसपार्क, कलंकी, बल्खु, पुरानो बसपार्क, सुन्धारा लगायतका स्थानमा रहेका बस काउन्टरहरुमा ठूलो भीड…
‘अवतार’का एकैपटक चार सिक्वेलको घोषणा
झन्डै जेलमा परेका थिए ऋषि धमला !
अब आवश्यकता अनुसार तेल पाइने, स्टक राख्ने पम्पलाई कारवाही